 Posted in ဆောင်းပါး	 Tagged Church, အသင်းတော်	0	Sep
 Posted in ဆောင်းပါး	0	Jul
 Posted in ဆောင်းပါး	0	Jun
(၁) စကားငါးလုံးပါသောစကားစု – “You didagood job” (သင်လုပ်တာ သိပ်ကောင်းတာပဲ) “You didagood job” ဟူသော ချီးမွမ်းစကားကို သူတပါးအပေါ်၊ လုပ် ဖေါ်ဆောင်ဖက်၊ မိတ်ဆွေ၊ ဇနီး/ ခင်ပွန်း သည် အပေါ် များများပြောပါ။ သင့်အ ပေါ် ထိုသူ၏တုန့်ပြန်မှုသည် လွန်စွာ အကျိုးရလဒ် ကောင်းကြောင်း တွေ့မှာ ဖြစ်ပါသည်။
(၂) စကားလေးလုံးပါသော စကားစု – “What is your opinion” (ခင်ဗျားဘယ်လို သဘောရသလဲ) “What is your opinion” ဟူ သောမေးခွန်းသည် သူတပါးကို လေးစား အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ သူတပါး၏အမြင် ခံယူချက်ကိုလည်း ကြိုဆိုလက် ခံခြင်း သဘောကိုဆောင်သည်။ လူမှုဆက်ဆံရေး၌ အလွန်အ ထောက် အကူပြုသောစကား ပင်ဖြစ်သည်။
(၃) စကားသုံးလုံးပါ သော စကားစု – “Let’s work to gether” (အတူတူ ဆောင်ရွက်ကြစို့) “Let’s work to gether” ဟူသောစကားသည် သူတပါး နှင့် ပူးတွဲ၍ လုပ်ကိုင်လိုစိတ် ကိုဖော်ပြသော စကားပင်ဖြစ် သည်။ မိသားစု၊ မောင်နှမ အ ချင်းချင်း၊ ရင်းနှီးသော သူငယ်ချင်းများ အကြား၊ လုပ် ဖော်ဆောင်ဖက် များအကြားတွင် အလွန်အရေးပါသော ပြောဆို ကျင့်သုံးရမည့် စကားဖြစ်သည်။
 Posted in ဆောင်းပါး	 Tagged ဆောင်းပါး	0	Jun
ခရစ်ယာန်လူငယ်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ရာတွင် နှုတ်ကပတ်တော်သွန်သင်ချက်နှင့် ညီညွတ်ရမည်။ မျက်မှောက်ခေတ်အခြေအနေနှင့် ဆီလျော်သောလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။
(က) ခရစ်ယာန်လူငယ်၏ အရည်အချင်းများ
(၁) ခရစ်ယာန်လူငယ်သည် နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း အသက်ရှင်လိုက်လျှောက်ရမည်။
(ဆာ ၁၁၉း၉၊ ဒေသနာ ၁၂း၁)
(၂) ခရစ်ယာန်လူငယ်သည် တာဝန်ယူတတ်သောသူဖြစ်ရမည်။ (မြည် ၃း၂၇၊ က ၃၉း၁-၁၂)
(၃) ဥာဏ်ပညာ ဆည်းပူးသူဖြစ်ရမည်။ (၃ရာ ၃း၇-၉)
(၄) ရွှင်လန်းစွာ အသက်ရှင်သောသူဖြစ်ရမည်။ (ဒေ ၁၁း၉)
(၅) အနာဂတ်အတွက် ရူပါရုံရှိသောသူဖြစ်ရမည်။ (ယောလ ၂း၂၈၊ သုတ္တံ ၂၉း၁၈)
(၆) အိနြေ္ဒစောင့်၍ ပုံသက်သေကောင်းပြရမည်။ (တိတု ၂း၆၊ ၁တိ ၄း၁၂)
မျက်မှောက်ခေတ်တွင် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးအခြေအနေများ လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲနေသည်။ သတင်းနည်းပညာလည်း တိုးတက်နေသည်။ အသင်းတော်များသည် ပြောင်းလဲမှုများကို အမှီလိုက်ပြီး ယုံကြည်သူလူငယ်များကို ပြုစုပျိုးထောင်ရပါမည်။
(၁) ပညာရေးတွင် ထူးချွန်သော လူငယ်များဖြစ်ရန် အသင်းတော်များက အားပေးရပါမည်။
(၂) စီးပွားရေးတိုးတက်သော လူငယ်များဖြစ်စေရန် အသင်းတော်က အားပေးရပါမည်။ ကြွယ်ဝခြင်းသည် အပြစ်မဟုတ်၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ၏ ကျွန်ဖြစ်ခြင်းသာ အပြစ်ဖြစ်သည်။
(၃) အိမ်ထောင်ရေးတွင် ထမ်းပိုးညီသောအိမ်ထောင်များ တည်ထောင်နိုင်ရန် သွန်သင်ရပါမည်။ ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံ ရောယှက်နေသောခေတ်တွင် ခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်များ၏ ရှင်သန်မှုကိုဂရုပြုရပါမည်။
(၄) ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်ကို လူငယ်များ စွဲမြဲစွာခံယူဖို့လိုပါသည်။ ရုပ်ဝါဒနှင့် မှားယွင်းသော သြ၀ါဒများသည် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်ကို ခြိမ်းခြောက်နေပါသည်။
(၅) အသင်းတော်ကို ချစ်မြတ်နိုးသော လူငယ်များဖြစ်ရမည်။ အသင်းတော်ကို ဗဟိုပြုလျက် ခရစ်တော်၏မေတ္တာဖြင့် လူသားများကို အစေခံရမည်။ ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည်။
တစ်ခါက အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်၊ အင်ဒီယာနား ပိုလစ်မြို့ကလေးမှာ နာမည်ကြီးအဆိုတော် အဲလ်ဗစ်ပရက်စလေ (Elvis Presley)၏ စတိတ်ရိုးပွဲတစ်ပွဲ ရုံသွင်း ပြသနေပါသည်။ ပွဲလုံခြုံရေးအတွက် ပြည်နယ်ရဲအရာရှိတစ်ဦးက တာဝန်ယူရလေသည်။
“အင်း အိပ်ငိုက်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ စတိတ်ခုံနောက်ဖက်လျှောက်လိုက်ဦးမှ။ ” ပြောပြောဆိုဆို စတိတ်ခုံနောက်ဖက်ထွက်သွားလေ သည်။ ဟိုဘက်လည်းရောက်ရော မိုးကာအင်္ကျီ ခပ်နွမ်းနွမ်းဝတ်ထားကာ ရှူးဖိနပ်ခပ်ညံ့ညံ့စီးထားသူတစ်ဦးကိုတွေ့ရသည်။ သူရောက် လာသည်ကိုပင်မမြင်ယောင်ပြုကာ ထိုလူသည် စတိတ်ခုံ နောက်ဖက်မှာ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် သွားလာ နေသည်။
“သည်လူကိုကြည့်ရတာ မသင်္ကာဘူး။ ဆွဲထုတ်ပစ်မှ။”
တစ်ကိုယ်တည်းပြောရင်း အသွား၊ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက နောက်မှလှမ်းဆွဲထားလေသည်။ ထိုမိတ်ဆွေက
“အဲသည်လူက သည်ပွဲမန်နေဂျာ ဗိုလ်မှူးကြီး ပတ်ကားဗျ။”
လူတစ်ယောက်၏ မြင်သာထင်သာသည့် အပေါ်ယံသဘောကိုကြည့်ကာ သူ့ကို အမြင်မှားအထင်မှားရခြင်းအတွက် ရဲအရာရှိကြီး အတော်တုန်လှုပ်သွားမိလေသည်။
သင်ခန်းစာလည်း တစ်ပွေ့တစ်ပိုက် ရလိုက်လေသည်။
ဥပဒေသကသင့်အတွင်းစိတ်ကအလိုလိုထိုး ထွက်လာသောထင်မြင်ချက် (သို့မဟုတ်) စိတ်ကူးစိတ်သန်းသည် အမြဲတန်းမှန်သည် ဟု ဘယ်သောအခါမှ မမှတ်ယူပါလေနှင့်။
တစ်နေ့ကအပြင်ထွက်ရင်း လမ်းကြုံ တာနှင့် မန်္တလေးမြို့၏နာမည်ကြီးစတိုးဆိုင် တစ်ခုထဲသို့ဝင်ခဲ့မိပါသည်။ ဆိုင်ထဲလှမ်းဝင် လိုက်သည်နှင့် ဧည့်ကြိုမိန်းကလေးကဖြတ်ကနဲ ဆို ကျွန်တော့် ခြေထောက်ကို ငုံ့ကြည့်ပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း “ငါ ဖိနပ်မှား စီးလာမိသလား” ဟုပြန်ငုံ့ကြည့် မိပါ သည်။ မှန်တာပဲ။ ကတီပါ ဖိနပ်အမဲရောင် စီးလာတာပါ။
သည်အကြောင်း စကားစပ်မိ၍ မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုပြောပြတော့ သူက
“အဲဒါ ခင်ဗျား သူတို့စတိုးဆိုင်ကနေ ၀ယ်နိုင်မဲ့လူ ဟုတ်မဟုတ် စီးလာတဲ့ဖိနပ်ကြည့် ပြီးအကဲခပ်တာဗျ”။
တော်ပါသေးသည်။ ထိုနေ့က အ၀တ် အစား သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်သွားမိလို့။ “မဟုတ် ရင် ငါ့ကိုဘယ်သူကမှာ ဘာဝယ်မှာလဲရှင်လို့ မေးမှာမဟုတ်ဘူး”။
နောက်ဥပဒေသတစ်ခုက လူတစ်ဦး မှာပထမအဦးဆုံးတွေ့လိုက်ရသည့် ထင်သာ မြင်သာသောအချက်တစ်ခုသည် ထိုလူစင်စစ်၊ လုံးလုံးလျားလျား မဟုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် ကျိုးကြောင်းမသိရသေးမီ ကြိုတင်မဆုံးဖြတ်ပါနှင့်။ သင့်စိတ်တွင်အဦးဆုံး ၀င်ရောက်လာသည့်ထင်မြင်ချက်သည် အကန့် အသတ်ရှိပါသည်။
အမြင်ကျဉ်းမြောင်းနေတတ် ပါသည်။ အထင်အမြင် အများကြီးလွဲမှားနေ တတ်ပါသည်။ စိတ်ကစဉ့်ကလျားဖြစ်နေသူ များသာ အသေအချာမသိဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချလေ့ရှိပါသည်။
သင့် အာဃာတ၊ အစွဲအလမ်း၊ စိုးရိမ် မှုနှင့် ဘက်လိုက်ခွဲခြားတတ်သော အလေ့အထများကိုကြည့်ကာ“သင့်အလုပ် အောင်မြင်မယ်။ မအောင်မြင်ဘူး” ဟု ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လူဆိုသည်မှာ ကိုယ် ရွေးမြင်သည့် မြင်ကွင်းအတိုင်း လူတွေကို တွေ့ ရလေ့ရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအလေ့ အထသည် သင့်အလုပ်အောင်မြင်ခြင်း ဆုံးရှုံး ခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။
ယေရှုကိုယ်တော်သည် လူတစ်ဦး၏ ““လူမျိုးဘာသာ””၊ ““အမျိုးသမီးအမျိုးသား””၊ ““ဆင်းရဲချမ်းသာ””၊ (သို့မဟုတ် ) မြင်သာထင်သာသည့် အပေါ်ယံသဘော
တစ်ခုကြောင့် ခွဲခြားဘက်လိုက်ခြင်း ဘယ်သော အခါမှပြုတော်မမူပါ။ ““တံငါသည်များနှင့် စကား လက်ဆုံ ကျရမည် လား။”” ““လူတိုင်းက မျိုးမစစ်သူ၊ သစ်္စာဖေါက်သူဟု သတ်မှတ်ထား သောအခွန်ခံသူတို့နှင့် ညစာသုံးဆောင်ရမည် လား။”” ““လူရာသွင်းခြင်းမခံရသည့်ပြည့် တန်ဆာများကို စကားစမည်ပြော ရမည်လား””။ မည်သူနှင့်မဆို
ကိုယ်တော်ရှင်စိတ်သက်တောင့် သက်သာ ရှိတော်မူပါသည်။ ကိုယ်တော်ရှင် အတွက် ကျားယ မ မရှိပါ။ ဆင်းရဲချမ်းသာမရှိ ပါ။ မဲသူ ဖြူသူ မရှိပါ။
ငုပ်နေမြှုပ်နေသေးသော်လည်း သက်ဝင်ထက်မြက်လာနိုင်သည့် အရည်အသွေးများ လူတစ်ဦးစီတိုင်းမှာ ရှိနေကြောင်း ယေရှုရှင်သိ တော်မူပါသည်။ ထိုအချက်ကြောင့်
ကိုယ်တော် သည် လူတစ်ဦးကိုတန်ဖိုးထားပါသည်။ လူတစ် ဦးဟာ အတိတ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ထိုသူကို လူ့ စာရင်းမှာ ဖယ်ရှားပစ်တော်မမူပါ။ လူ့အသွေး အသားမပါဘဲ၊
မယ်တော်၏ကညာစင်အဖြစ် မပျက်ဘဲ၊ ဘုရားတန်ခိုးတော်နှင့် မိမိမယ်တော် ၏၀မ်းကြာသိုက်မှာ ပဋိသန္ဓေစွဲယူကာ ကြွလာ တော်မူခဲ့သောအရှင်မြတ်သည် လူတို့၏ အမျိုးမျိုးသော အထင်အမြင်ကို ခံတော်မူခဲ့ရပါသည်။ ထိုအထင်အမြင်စွဲထင်ချက်များကို ယေရှုရှင် ကျော်ဖြတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ နိမ်ကျသည့်လူမျိုးဟု သတ်မှတ်ထားသည့် ရှမာရိလူတို့ကို ဂျူးလူမျိုးတို့ကအဖက် လုပ်စကားမပြောကြသော်လည်း၊ ယေရှုရှင် သူတို့ကိုဖေါ်ရွေစွာစကားပြောတော်မူခဲ့ပါသည်။ ရေတွင်းမှာ ရေခပ်ဖို့လာသောအပြစ်သည်ရှမာရိ အမျိုးသမီးနှင့် ကိုယ်တော်ရှင် စကားလက်ဆုံ ကျရုံတင်မကဘဲ သူမဘ၀ကိုအပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်။ သည်အချက်ကို တပည့်ကြီးရှင်ပေတရုက “ဘုရားသခင်သည် မျက်နှာမလိုက်ကြောင်းကို ငါအမှန်တကယ် သိမြင်ရပြီ”ဟု သက်သေခံခဲ့ဖူးလေသည်။(တမန်တော်ဝတ်္ထု ၁၀း၃၄)
လူတစ်ဦးထံမှ ထင်သာမြင်သာသော အချက်ကို ထိုလူပုဂ်္ဂိုလ်ထက်ကျွန်တော်တို့ ပိုပြီး စောသိနိုင်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဘက် လိုက် ခွဲခြားနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သတင်းပို့ချက် များနှင့် ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့နေသော ပတ်ဝန်းကျင် မှာမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါသည်။ လူတိုင်းကို လူတစ်ယောက်အနေနှင့် တူညီသောလက်ခံမှုကိုပေးကြဖို့ အရေးကြီးလှ ပါသည်။ လူတစ်ဦးစီ ရသင့်ရထိုက် သည့်လေးစား မှုကို တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပေးနိုင်ရပါ မည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ဘုန်းဂုဏ်တော် ရှင်ယေရှုခရစ်တော်၌ ယုံကြည်သူများဖြစ်ကြ သောကြောင့် အဆင့်အတန်းခွဲခြားခြင်း မရှိဖို့ လိုပါသည်။
တကယ်တော့ ဤကြောင်ဝါဝါကလေးကို မွေးမြူရန် အကြောင်းမှာ အိမ်၌ တစ်စထက်တစ်စ သောင်းကျန်းလာသော ကြွက်များကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်သည် ကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ကို ရွာတစ်ရွာရှိ ဆရာတစ်ဦးက လက်ဆောင်ပေးလိုက်၍ ရရှိလာကာ အိမ်တွင်မွေးရန် အကြောင်းဖြစ်လာပါသည်။ ကြောင်ကလေးက မိခင်ကြောင်မကြိးနို့ဖြတ်ထားခါစပင်ရှိသေး၍ ငယ်သေးသဖြင့် ယူလာချိန်တွင် ထမင်းသာမက နို့ဆီကို ဖျော်၍ တိုက်ရာ ကြောင်ကလေးမှာ “ တဂွက်..ဂွက်..တဗြက်ဗြက်” နှင့် လျှာဖြင့် လျက်သောက်နေသည်မှာ အလွန်ကြည့်၍ ကောင်းပါသည်။ အလွန်မှပင် ချစ်ခင်တွယ်တာစရာကောင်းပါသည်။ ကျွန်တော်သွားလေရာသို့ တကောက်ကောင်ဖြင့် လိုက်တတ်သည်။ အစာဆာလျှင်လည်း “တညောင်…ညောင်” ဖြင့် အသံပေးတတ်သည်။ ထမင်းစားလျှင် သူ့အား ဦးစားပေး၍ သားငါးများကျွေးလေ့ရှိသည်။ ကြောင်ကလေးအား “ ဖိုးရှုပ်” ဟုအမည်ပေးရခြင်းမှာ ချစ်စနိုးခေါ်ခြင်းဖြစ်သကဲ့သို့ ကျွန်တော်အား အလွန်အလုပ်ရှုပ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့ စာရေးစားပွဲပေါ်သို့ တက်၍ ဘောပင်များနှင့် ဆော့ပင်များကို ကိုက်ချီက ဆော့တတ်သည်။ တခါတရံအဝေးကို ချီယူဆော့သွားတတ်သဖြင့် ဘောပင်များ ကို ပြန်ရှာ ရသည်ကလည်းအလုပ်တခုဖြစ်သည်။ ရံဖန်ရံခါ ကျွန်တော် စာရေးနေချိန်၌ ကျွန်တော့်ခြေထောက်များကို ပွတ်သပ်၍လည်းကောင်း၊ မနာအောင် ကိုက်၍လည်းကောင်း၊ ပုဆိုးစကို အတင်းဆွဲခါ၍ ဆော့ကစားတတ်သဖြင့်လည်း “ ဟာ…ဒီကောင်…တော်တော်ရှုပ်
တာဘဲ” ဟုပြောရင်း “ ဖိုးရှုပ်” ဟု အမည်တွင်သွားရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အပေါ် သခင်လိုသာမက မိခင်၊ ဖခင်ကဲ့သို့ တွယ်တာနေသော ကြောင်ကလေးဖိုးရှုပ်ရောက်လာသည့်အချိန်၌ အိမ်တွင်းသောင်းကျန်းနေကြသော ကြွက်များသည် ပျောက်ခြင်းမလှပျောက်ကုန်ကြ၍ ဖိုးရှုပ်အား ကျေးဇူးတင်ရပါသည်။ ကျွန်တော် အပြင် (သို့) ခရီးထွက်သွားလျှင် ကြောင်ကလေးဖိုးရှုပ်ကား အိမ်ဝသို့ မျှော်ကြည့်ရင်း အိမ်တွင်း၌လှည့်ပတ်ကာ “တညောင်…ညောင်” ဖြင့်အော်ရင်း သခင်ကို ရှာတတ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်က ခရီးထွက်တော့မည်ဟုဆိုလျှင် ကြောင်ကလေးဖိုးရှုပ်အား ဂရုစိုက်ရန် ပတည့်များကို မှာကြားရသည်ကလည်း အလုပ်တခုဖြစ်လို့နေပါသည်။
တနေ့တွင်တော့ ကြောင်ကလေးဖိုးရှုပ်နှင့် ကျွန်တော့်အကြား ပြောပြစရာ ဇာတ်လမ်းတပုဒ် ဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ထိုနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့ပေ့ါ။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းက အပြန်၊ အိမ်ရောက်သည်နှင့် အပေါ်ခံတိုက်ပုံအင်္ကျီကိုချွတ်ပြီး စိတ်မောလူမောနှင့် အိပ်ရာထက်တွင်
“ ဝူး” ကနဲ့ အသံပြုကာ လဲလျောင်း အနားယူနေခိုက် ရုတ်တရက် ကြောင်ကလေးဖိုးရှုပ်သည် ခုတင်အောက်မှ ခုန်တက်လာကာ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ပေါ်သို့ တက်လာပါသည်။ ခါတိုင်းလည်း သူဒီလိုတက်နေကျဘဲ ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်သည် ယခုတကြိမ်တွင်တော့….သူ့အား အတော်လေးစိတ်ဆိုးမိသည်။ အကြောင်းမှာ ကြောင်ကလေးဖိုးရှုပ်၏ ခြေလက်များတွင် ရွှံ့ဗွက်များပေကျံနေသဖြင့် ကျွန်တော့် ရှုပ်အင်္ကျီဖြူ
ဖြူပေါ် ရင်ဘတ်နှင့် ဝမ်းဗိုက် တစ်ဝိုက်တွင်ရွှံ့များဖြင့် ပေကျံကုန်တော့သည်။ သူကတော့ ဘာမှမသိ…သူ့ခြေလက်များတွင် ပေကျံနေသော ရွှံ့ဗွက်များက သခင်၏ ဖြူစင်နေသော အင်္ကျီနှင့် တန်သလား၊ မတန်ဘူးလားဆိုသည် ကိုလည်းမတွေးမိပါ။ ခါတိုင်းကဲ့သို့ပင် ဖြစ်ဟန်တူသည်။ ကျွန်တော့်က အင်္ကျီဖြူဖြူပေါ် ဖိုးရှုပ်၏ ခြေလက်မှ ရွှံ့ဗွက်တွေ ပေကျံသွားရသဖြင့် နှုတ်မှ……..
“ဟာ..ဒီကောင်….ဖိုးရှုပ်….ကဲ…ကွာ” ဟုဆိုကာ သူ့အားကိုင်ယူပြီး စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးဖြင့် အဝေးသို့ကိုင်ပေါက်ပစ်လိုက်တော့သည်။ ဖိုးရှုပ်ကား…ကျွန်တော်ကစိတ်ဆိုးဆိုးဖြင့် ပစ်ပေါက်ခံလိုက်ရသော်ငြားလည်း ကြောင်ဖြစ်နေ၍ ကြောင်ကျ…တော့ကျပါသည်။ သို့ရာတွင် သူသည်နားမလည်နိုင်ပါ။ သခင်က ခါတိုင်းကဲ့သို့ ချော့မြူမနေဘဲ ဘာကြောင့် သူ့အားကြမ်းတမ်းရက်စက်စွာ အဝေးသို့ ကိုင်ပေါက်ပစ်လိုက်ရသလဲဟူ၍ နားမလည်ဟန်ဖြင့်ကြည့်ကာ “ ညောင်…ညောင်” ဟုသနားစဖွယ် အသံပြုနေရှာပါသည်။ တစ်ခါမှ သူ့ကို ဒီလိုရက်စက်စွာပြုမူတာ မခံရဘူး၍ ဝမ်းနည်းနေဟန်ရှိသည်။ ကျွန်တော့် အနားသို့ ကပ်မလာရဲတော့ဘဲ အဝေး၌သာ အသံပြုရင်း ရှိနေပါသည်။ သူ့အားကြည့်ရင် ချက်ချင်းပင် ကျွန်တော့်ရင်ထဲ၌ သနားစိတ်သည် ဝင်ရောက်လာပါသည်။ အစက ကျွန်တော့်၏ ဖြူစင်သန့်ရှင်းမှုနှင့် ကြောင်ကလေးဖိုးရှုပ်၏ ညစ်ပတ်နေသောလက် ထိတွေ့ခံလိုက်ရ၍ စိတ်ဆိုးကာ ဒေါသ ရုတ်တရက် ထွက်လာမိသော်လည်း သူ့အား ချစ်ခင်သောစိတ်၊ ရှိနှင့်ပြီးသာ မေတ္တာတွေကြောင့် ပြန်ပြီး စဉ်းစားမိသော် ချစ်စိတ်၊ သနားစိတ်နှင့် နားလည်ပေးသောစိတ်တို့ကသာ အနိုင်ယူသွားခဲ့ပါသည်။
“ သြော်…သူ့ခမျာ သိမှ မသိရှာဘဲကိုး. သူ့ရဲ့ပေကျံနေတဲ့ ခြေလက်တွေဟာ သခင်ရဲ့ ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ အင်္ကျီတွေနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာကိုလေ….” ဟုတွေးရင်း နှင့် ကြောင်ကလေးဖိုးရှုပ်အား သနားချစ်ခင်ခွင့်လွှတ်စိတ်ကသာ လွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင်
“ မီးမီး…မီးမီး….လာ….လာ…ဖိုးရှုပ်….သားလေး…လာလာ” ဟုပြန်လည်အသံပြုကာ ခေါ်မိပါသည်။ သို့ရာတွင် သခင်၏ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းမှုနှင့် အဝေးသို့ ကိုင်ပေါက်နှင်ထုတ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရသော ဖိုးရှုပ်ကားအနားသို့..မလာရဲ…မလာနိုင်ဘဲ…အဝေး၌သာ… “ညောင်…ညောင်” ဟုအသံပြုနေရှာပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်ကပင် သူ့အနားကို ချော့မော့ရင်း ချဉ်းကပ်သွားကာ သူ့အား ပွေ့ပိုက်ဆွဲယူ၍ ရင်ခွင်၌ ဆွဲသွင်းထားလိုက်ပါတော့သည်။ သို့ရာတွင်
“ ကဲ….ကဲ…မင်း ဒီပေကျံနေတဲ့ခြေထောက်တွေနဲ့ဆိုရင် ငါ့အင်္ကျီသာကမ စောင်၊ အိပ်ယာတွေပါ ထပ်ပြီးပေကုန်ဦးမယ်ဆိုပြီး…….”
ရဇလုံတခုထဲတွင် ရေထည့်၍ သူ၏ ခြေလက်ကလေးများကို ရေတွင် နစ်စေကာ သန့်စင်အောင် ဆေးကြောပြိး အဝတ်ခြောက်ဖြင့် သုတ်ပေးကာ…သန့်ရှင်းခြင်းအမှုကို အရင်ပြုလိုက်ပါသည်။
“ မင်းကို သန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးပြီးပြီးနော်….ဖိုးရှုပ်….နောက်တခါ ဒီလိုညစ်ပတ်နေအောင် ဗွက်ထဲဆင်းပြီးမဆော့တော့နဲ့….” ဟုလည်းအမှာစကားပြောမိပါသည်။ ဖိုးရှုပ်ကား ကျွန်တော့်စကားနားလည်သည် မလည်သည်ကိုကား မသိပါ။ ဤသည်မှာ သခင့်၏စေတနာမေတ္တာနှင့် အမှာစကားသာဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော် ထိုအကြောင်းကို ပြန်စဉ်းစားပြီး အသိတရားတရပ်ကိုရခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့လူသားများနှင့် ဘုရားသခင်အကြား ဆက်သွယ်မှုကရော ထိုအဖြစ်ပျက်အတိုင်းပါပေတည်း။ ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းအရှင်ဖြစ်၍ အပြစ်တရားရှိသည့် လူသားများနှင့် လားလားမှ ဆက်ဆံ၍ မရပါ။ ထို့ကြောင့်ပင် အပြစ်မကောင်းမှုပြုမိသော အာဒံနှင့်ဧဝဟူသည့် လူသားဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည် ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှနှင်ထုတ်ခြင်း ခံလိုက်ရပါသည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်သည် မိမိကိုယ်တိုင်ဖန်းဆင်း၍ ဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းခြင်းပြုထားသည့် လူသားများကို ချစ်သော မေတ္တာတော်ကြောင့် မိမိနှင့် ပြန်လည် မိတ်ဿဟာယဖွဲ့ ဆက်ဆံနိုင်ရန်၊ မိမိထံပါးသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်ဆန္ဒရှိလေသည်။ အပြစ်၊ ညစ်ညမ်းခြင်းကြောင့် အဝေးသို့တွန်းပို့လိုက်သော်လည်း ချစ်မေတ္တာစိတ်ကြောင့် အနီးသို့ ပြန်လည်ဆွဲယူကာ ခေါ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားရာ လူသားများ၏ အပြစ်မကောင်းမှုကို ဆေးကြောသန့်စင်ပေးရန် လိုအပ်သဖြင့် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ပညတ်တော်များပေး၍လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်ငြားလည်းလူသားများသည် သခင်ထံသို့ ပြန်လည်မရောက်ရှိခဲ့ပါ။ သို့အတွက်ကြောင့်…….
မိမိ၏ တစ်ပါးတည်းသော သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကို လူ့လောက၌ လူ့ဇာတိခံစေကာ စေလွှတ်၍ နောက်ဆုံး၌ သူ၏အသွေးတော်ဖြင့် အပြစ်မကောင်းမှုများကိုဆေးကြောကာ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် စိတ်ချရသော လမ်းစဉ်တစ်ရပ်ကို အကောင်ထည်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင် သန့်ရှင်းခြင်းကြောင့် တွန်းကန်မူအားနှင့် ဘုရာသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့် ဆွဲငင်မူအား နှစ်ရပ်သည် ဆိုင်ပြိုင်ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ထိုဆုံရပ်ကား ယေရူခရစ်တော် လက်ဝါးကားတိုင်မှာ အသေခံရသည့် ကရာနီတောင်ကုန်းပေါ်၌ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသခင်၏ ကားတိုင်ပေါ်မှ သွန်းလောင်းလိုက်သော အသွေးသည် လက်ခံသူကျွန်တော်တို့၏ အပြစ်မကောင်းမူများကို ဆေးကြောခဲ့ပြီးသူပေးလိုက်သော အသက်သည်လည်း လူသားတစ်ရပ်လုံး အသက်ရှင်မူအတွက် ကြီးမားသော ပေးဆပ်မူဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် ကြောင်ကလေးဖိုးရူပ်နှင့် သူ့အားချစ်ခင်သော သခင်ဖြစ်သည့် ကျွန်တော်တို့အကြား ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ှဇာတ်လမ်းကလေးကား… ဘုရားသခင်နှင့်လူသားများတို့အကြား ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်သော မေတ္တာနှင့်တူကြောင်းကို ပြန်လည် ပြောပြရင်း ……….။